Decobond, tontonana hazo vita amin'ny rindrina anatiny, Birao lamba amin'ny makiazy - Pivot
NY HITSIKA IZAO
Fampidirana fohy nataontsika
Pivot dia manana marika malaza maromaro toy ny IBOND, Decobond, I-Ceiling ary koa ny I-Micro ary izahay dia manokana amin'ny R&D, mamokatra sy mivarotra fitaovana maintso sy haingo vita amin'ny maintso avo lenta. Amin'ny maha-mpamatsy vahaolana rehetra ny fitaovana vaovao sy ny fametrahana rafitra amin'ny fananganana, haingo, famantarana ary indostrian'ny dokam-barotra, i Pivot dia manao fanavaozana ho fototry ny marika sy ny kolontsain'izy ireo.
Famonoana afo, fahavoazana ary akora-famoretana, fikorontanana amin'ny korontana, fisakaizana ny tontolo iainana, fametrahana mora, antibaktera
Ny tombony ara-teknika
Ny orinasa dia orinasa orinasa avo lenta amin'ny faritany any Jiangsu Province. Izahay dia manana ivontoerana fikarohana ary ekipa teknikan'ny 30people. Ny orinasa anay dia miara-miasa amin'ny oniversite malaza maro toa ny University Tsinghua, University of Tongji University Jiangnan University ary University University.
Ny tombontsoan'ny serivisy
Afaka manome anao serivisy momba ny fanamboarana ny vokatra sy drafi-pandinika lalina izahay. Ny fandefasana ny mety ho afaka ao anatin'ny iray volana ary manana fomba fitarainana fitarainan'ny mpanjifa tokoa izahay.
Architecture anatiny Design
Loko aluminium coating